LinkedIn မှာလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ Stats များ -
LinkedIn သုံးတဲ့သူတွေရှိလား? ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်း ဒါမှမဟုတ် Product တွေကို Platform စုံစုံမှာ Run ချင်လား? LinkedIn ကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အတွက် အဓိက Social Network တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုချင်တာလား? ဒါဆိုရင်တော့ ဒီ LinkedIn ရဲ့ 2019 Stats တွေကို တစ်ချက်လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်…
LinkedIn ကိုအသုံးပြုတဲ့ User ၃၅% ရဲ့ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားတွေကတော့ ၁၈နှစ် ကနေ ၂၉နှစ်ကြားထဲမှာရှိပါတယ်။ ဒီအချက်ကို သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် လူငယ်တွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်း၊ Product နဲ့ Service တွေဆိုရင် LinkedIn ကရွေးချယ်နိုင်တဲ့ Social Network တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Gender အရမှာတော့ LinkedIn ကိုအသုံးပြုတဲ့ User တွေကတော့ အမျိုးသမီး ၄၆% နဲ့ အမျိုးသား ၅၄% ရှိပါတယ်။
Usage ပိုင်းမှာဆိုရင် Desktop နဲ့ LinkedIn အသုံးပြုမှု ၆၀ မီလီယံ ရှိပြီး Smartphone တွေနဲ့ အသုံးပြုမှု ၂၀ မီလီယံ ရှိပါတယ်။ Desktop အသုံးပြုမှုက ပိုများတာကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Company တွေ Agency တွေအစရှိတဲ့ Business Run နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေက LinedIn ပိုသုံးတာကို သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။
၅၃%သော LinkedIn မှာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေတဲ့ Marketer တွေဟာ Video Content တွေကိုပိုပြီး အားပေးပါတယ်။ Graphic နဲ့တကွ တင်တဲ့ Post တွေမှာဆိုရင် Comment Rate ၉၈% အထိတိုးလာတက်ပါတယ်။ ၅၀% Question တွေပါတတ်တဲ့ Post တွေဟာ Engagement ၅၀% အထိပြန်ရတတ်ပါတယ်။ LinkedIn မှာ Sharing လုပ်ကြတဲ့ Post အရည်အတွက်တွေဟာဆိုရင် ၁ ပတ်ကို ၃ မီလီယံအထိ ရှိပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကတော့ 2019 LinkedIn Stats တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ LinkedIn ဟာကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ၊ ကိုယ်ရွေးချယ်သင့်တဲ့ Social Network ဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်း ဒီအချက်တွေကို ကြည့်ရှုပြီး လေ့လာသုံးသပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Monday November 25th, 2019/ Blog/0Comment